Somaliland iyo dacwadda Cali Samatar - BBC Somali
Somaliland iyo dacwadda Cali Samatar
Image caption Xisbiga talada Somaliland haya ee Kulmiye
Muddaharaad lagaga soo horjeedo dacwad Maraykanka kaga socota madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya General Maxamed Cali Samatar ayaa laga dhigay Jimcihii shalay gobolka Soomaalida ugu badan ku nooshahay ee waddanka Maraykanka.
Gen Maxamed Cali Samatar oo ay rag Soomaali ah oo dhalasho Maraykan leh ay ka dacweeyeen iyagoo ku eedeyey inuu dembiyo ka galay gobollada woqooyi dowladdii Soomaaliya oo uu ka ahaa gen Samatar nin madax ah oo sare, waxay dadka muddaharaadka dhigay u arkaan dacwaddaas mid aan xaq ahayn.
Haddaba, magaalada Hargeysa, shir jaraa'id oo uu ku qabtay maanta xisbiga hadda xukuma Somaliland ee Kulmiye ayaa wuxuu jawaab kaga bixiyay muddaharaadka lagu taageerayay General Samatar iyo aragtida ay dacwaddaas ka qabaan.
Gudoomiyaha xisbiga Kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaannu ka wareysannay jawaabtaasi ka sokow sida xisbiga kulmiye u arko furashada ururada siyaasadda.
Weriyaha BBC-da ee Hargeysa Axmed Saciid Cige oo wareystay Muuse Biixi ayaa ugu horreyn wuxuu weydiiyay jawaabta uu ka bixinayo muddaharaadka Maraykanka ka dhacay. dhegayso waraysiga.